IGPS / Izixhobo - iGeofumadas
Izixhobo izicelo ukuhlola kunye cadastre
Ukuqaqambisa ixabiso lethekhinoloji ye-geospatial kuqoqosho lwedijithali kunye nokudityaniswa kwayo kunye neetekhnoloji ezivelayo kumacandelo ohlukeneyo omsebenzi, intlanganiso yonyaka yeQonga leHlabathi leGeospatial iza kubanjwa ku-Epreli olandelayo. I-FARO, owona mthombo uthembekileyo wehlabathi wemilinganiselo ye-3D, imaging kunye…
GPS / Izixhobo, ezintsha
I-Hexagon ibhengeze itekhnoloji entsha kwaye yamkela abasebenzisi bayo kwi-HxGN LIVE 2019, ingqungquthela yayo yehlabathi yezisombululo zedijithali. Le ngqungquthela yezixazululo eqokelelwe kwiHexagon AB, enendawo ebangel 'umdla kwiimvakalelo, isoftware kunye nobuchwephesha bokuzimela, iququzelele inkomfa yayo yeetekhnoloji yeentsuku ezine eVenetian eLas Vegas, eNevada, eMelika.
Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, ezintsha
Isicelo sokuskena se-laser ye-3D sinqoba i-IF DESIGN
Isicelo seLeica Cyclone FIELD 360 sinikwe iwonga lesibini loyilo kwi-IF DESIGN AWARD 2019. Kunye nenkampani yamava omsebenzi (UX) i-Ergosign, iLeica Geosystems ithi thaca isicelo kudidi loqhakamshelwano. Kwiminyaka engama-66, i-IF Design Design iye yamkelwa njengompempe osemgangathweni ...
I-Leica Geosystems inikeza ithuluzi elitsha lokubamba idatha yezolimo
I-HEERBRUGG, ISWITZERLAND, APRILI 10, 2019 -ILeica Geosystems, eyinxalenye yeHexagon, ibhengeze namhlanje ukumiliselwa kwesixhobo esitsha sokubamba, ukwenza imodeli kunye neenkqubo zoyilo; ILeica iCON iCT30 ukuzisa ukusebenza ngakumbi kumzi mveliso wokwakha. Isixhobo se-iCON iCT30, esidityaniswe nesoftware yeLeica iCON yokwakha,…
Nge-3 ka-Epreli nange-4 yalo nyaka we-2019, iFairoftechnology -inkampani yaseSpain, eseMalaga, eququzelela zonke iintlobo zeziganeko ezinxulumene netekhnoloji- imema bonke oogxa be-geoengineering ukuba bathathe inxaxheba kumsitho omkhulu, apho Siza kubonisa izinto ezininzi ezintsha kule minyaka idlulileyo. I-Fairoftechnology, inezinto ezininzi ...
Namhlanje siza kukubonisa iincwadana kunye nokupapasha ukuqonda inkqubela phambili yetekhnoloji kwicandelo lobunjineli be-geo kunye nefuthe lazo kubomi bemihla ngemihla. Zonke zisimahla kwaye zilula ukufumana ukhetho. Ukujongana nokukhula ngokuthe nkqo kwetekhnoloji esetyenziswe kwindawo ye-geospatial, kubalulekile ukuhlala uhlaziyiwe ukuze igalelo labasebenzi liqhubeke nokuba ...
Ukulanda, Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo
Itekhnoloji ye-Geospatial. Ifunyenwe njengayo yonke itekhnoloji esetyenzisiweyo ukufumana, ukulawula, ukuhlalutya, ukubona nokuhambisa zombini idatha kunye nolwazi olunxulumene nendawo yento, idlulile kwisigqibo sayo sokuqala esine-GIS, GPS kunye nokuqonda okukude (RS in IsiNgesi) kubandakanya ubuchwephesha obuvelayo obusebenzisa icandelo ...
Amanyathelo ukwenza imephu usebenzisa drones
Ukuveliswa kwemephu kusetyenziswa obu buchule kunokuba yingxaki enkulu, enye yezo ngxaki ibaluleke kakhulu ngeziphumo zokuphulukana neenyanga zomsebenzi oluncedo xa ungenamava angaphambili kulo msebenzi. Abaseki benkqubo yeMephu yeAerotas bathetha nathi kwinqaku lePOB ...
Xa sifunda iithiyori ezahlukeneyo ezixhasa unxibelelwano olubandakanya ukuboniswa kweekhathuni, zombini njengenzululwazi ukumela iziganeko zejografi kunye nobugcisa bokunika olu lwazi ubuchule obufunekayo, siyaqonda ukuba umzuzu esiphila kuwo ubandakanya izinto ezininzi kubomi bethu bemihla ngemihla. apho sisebenzisa khona ukubonwa njengesenzo ...
Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, egeomates My
Ukulinganisa i-Geo kugxila kwindawo enye, lonke ixabiso lokuphononongwa kwemveliso ye-GIM International kunye ne-Hydro International. I-Geo-matching.com yindawo ezimeleyo yokuthelekisa imveliso yehardware kunye neengcali zesoftware kwicandelo le-geomatics, hydrography, kunye noqeqesho olunxulumene noko. Sifuna ukukhokela iindwendwe zethu kwi-labyrinth ye ...
U-Supergeo ujoyina i-GPS PL ukubonelela izixazululo zekeykey ze-iOS
ISuperGeo Technologies, ibhengeze intsebenziswano enomdla kunye neGPS PL, imodeli yomsebenzi etsala umdla kwaye ekhuthazwa yonke imihla ziinkampani ezithi endaweni yokukhuphisana neemarike, zenze ulungelelwaniso ekukhangela amava angcono kubasebenzisi. Ezi nkampani zimbini zibonelela ngezisombululo ze-GIS zezixhobo eziphathwayo, ngenxa yabo ...
GPS / Izixhobo, SuperGIS
Ityala: Ndinedatha eqokelelwe nge-GPS Promark 100, kwaye ndisebenzisa i-post-processing ye-GNSS application yezi zixhobo, indivumela ukuba ndithumele ulwazi kwi-Excel. Iikholamu eziphawulwe ngombala otyheli ngamacandelo empuma nawasemantla kunye nesichaso sawo; enye ingcaciso nje enxulumene nokulungiswa kwangemva. Ingxaki: Ndifuna abasebenzisi ukuba ...
GPS / Izixhobo, Microstation-Bentley